Qiimaha Saaxiibtinimada - Qalinkii Muxammed
Waxaa jiray bari sadex nin oo saaxiibo ahaa, waxaa lakala odhan jiray Cumar, Axmed iyo Cabdilaahi.
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday inay Cumar dhibaato dhaqaale soo wajahdo, Cumar xaaskiisii oo ay dhibaatadu taabatay ayaa tidhi “Cumaroow waadigii saaxiibada fiican lahaan jiraye, orodoo wax inoosoo waydii, haday sidaad sheegtay yihiin waynu arki iyo hadii kalebee.” Cumar oo dhibsaday hadalka xaaskiisa ayaa waxa uu u qoray warqad saaxiibkii Cabdilaahi isagoo leh “Saaxiib dhibaato ayaa i haysata ee waxaad iisoo dirtaa waxaad awoodi karto oo dhaqaale ah.” Markii loo keenay Cabdilaahi warqadii, waxa uu markiiba soo qaaday lacag uu hayay oo ahayd intii jeebkiisa ku jirtay, lacagtaas oo uu rabay inuu iskaga bixiyo dayn lagu lahaa, wuxuu u dhiibay ninkii warqada u siday isagoo yidhi “Anigoo nool saaxiibkay cadaw u jabi maayo, ee ugee intaasaan hayaaye una sheeg hadii ay ku filnaan waydo inuu igu soo war celiyo!”
Cabdilaahi wuxuu warqad isna u qoray markiiba saaxiibkii Axmed, isagoo ka dalbanaya caawimo kana qarinaya inuu wuxuu hayay ku caawiyay saaxiibkoodii cumar. Axmed ayaa helay warqadii ka timid Cabdilaahi. Axmed sidoo kale muu haysan wax uu saaxiibkii ku caawiyo, waxay ka taagnayd heer aanu haysan wax uu cuni lahaa cashada ama uu ku cashayn lahaa habeenkaas! Axmed isna markiiba wuxuu is yidhi saaxiibkaa oo caawimo kaasoo dalbaday faro madhnaan hadaad celiso runtii raganimo maaha. Axmed isna waxa uu markiiba u qoray warqad Cumar! isagoo le “Saaxiib dhibaato dhaqaale ayaa i haysata ee hadaad wax igu dhaanto bal isoo caawi” isagoo u raba lacagtaas Cabdilaahi!
Cumar iyo xaaskiisii ayaa waxaa u yimid Dhaqaalihii ay ka dalbadeen Cabdilaahi, waa ay farxeen cumar ayaa u sheegay xaaskiiisii waan ogaa inaanuu saaxiibkay marnaba faro madhnaan isoo celin doonin! kurbadii iyo dhibaatadii haysatay wakhtiyar kadib ayay hadana kusoo noqotay, markay cumar soo gaadhay warkii uga yimid Axmed! Cumar wuxuu isaguna go’aansaday dhaqaalihii cabdilaahi uga yimid inuu dhamaantii saaxiibkii Axmed gaadhsiiyo! Xaaskii Cumar oo sidii hore dhibaatada iyo dhaqaale xumaanta taabatay ayaa aad uga xanaaqday go’aankaas Cumar gaadhay kuna tidhi “Cumaroow go’aankan markaad gaadhayso miyaanad ogayn xaalada aynu ku suganahay?” Cumar oo hadlaya ayaa ugu jawaabay xaaskiisii “Runtii saaxiibkay dhibta haysata ayaa teena ka wayn, illaahii wax arsaaqi jiray wuu joogaa ee faro madhan ku celin maayo runtii saaxiibkay oo caawimo isoo waydiistay, ee xaaskaygiiyeey samir ogoow!”
Dhaqaalihii ayaa loo keenay axmed isagoon wax yar laga saarin, Axmed siduu u waday ayuu u geeyay xoolihii Cabdilaahi! Cabdilaahi ayaa arkay, waa Lacagtii oo sidii uu u duubay u duuban, intuu aamini waayay ayuu waydiiyay, “saaxiib lacagtan halkeed ka keentay Axmadoow?” Axmed waxa uu usheegay xaalkii uu ku sugnaa, iyo siduu xoolahan kusoo helay! Cabdilaahina waxa uu usheegay inuu xoolahan isaga ka yimaadeen. Waxaa maqlay sheekadii ninkii magaalada ka ahaa Amiirka, waxa uu ku casuumay sadexdii nin gurigiisa, isagoo la yaabay saaxiibtinimadoodu iyo siday u dhaqmeen, kuna abaal mariyay mid kasta lacagtii ay u baahnaayeen sadex laabkeed!
Cumar oo xaaskiisii la hadlaya ayaa ku yidhi “Illaahay waa uu la socdaa qalbiyada nadiifta isku ah oo marnaba cidla ku dhaafi maayo, sidaan kuu sheegayna wataas dhacday, hadaanan is dhaafin lahayn xoolahaas maanta waxan oo dhan maynaan helneen ee markasta ogoow hadaad wax bixiso inuu rabi wax ka wayn kuugu badalayo!”
Saaxiibka dhabta ahi waa sida Dhagaxa dheemanta ah oo kale!